Best Saffarada Day Si Qaado From Berlin | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Best Saffarada Day Si Qaado From Berlin
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo(Last Updated On: 31/10/2020)
Safarada Maalinta Qiimeynta-Sare Si Looga Qaado Berlin waa waajib inkasta oo Berlin lafteedu ay tahay meel aad ufiican oo la booqdo! Waxaa jira jiidashada weyn oo ku filan in caasimada Germany in ay sii aad degan maalmo. Si kastaba ha ahaatee, maalin safarada ka Berlin in magaalooyinka deriska la ah iyo beeraha ku siin karaan nasniinta heer sare ah oo ka dadkii badnaa. Laga soo bilaabo daaraha waaweyn oo la jecel yahay iyo beeraha sanayd of aabbo in quruxda dabiiciga ah ee Havel Webiyaal iyo batay, Hareeraha Berlin ayaa laga helaa badan oo soo jiidashada iyo waxyaalaha ay sameeyaan. magaalada rail iyo gaadiidka dadweynaha shabakadaha fududaato inuu ka baxo oo ku saabsan, iyo safarro abaabulan ayaa fududeynaya socdaal dheeraad ah haddii loo baahdo.
Trip Day From Berlin: aabbo
No baxsado Berlin helo dareenka badan aabbo. Sidaasi darteed ma dhici karto inay qabaan liiska maalin safarada ka Berlin waxa aan. Sababta waa mid fudud. gudahood 40 daqiiqado waxaad kaga ganacsan doontaa magaalada weyn maalin dhex mushaaxaya beeraha iyo daarihii magaaladan hore ee boqortooyada Prussia.
Bilow aad safar maalin aabbo Baadi dhinaca Quarter Dutch Old. The bricked naqshadaha style Dutch gaduud ah oo aabbo Quarter Dutch waa mid gaar ah, ma aha oo kaliya in Germany, laakiin in Yurub oo dhan. Xataa ee Nederland, doonaya outbuildings u dhigma Jan Bouman curiyay qarnigii 18-aabbo waa wax aan macquul aheyn.
Dresden in Tareenadu aabbo
Magdeburg in Tareenadu aabbo
Trip Day From Berlin: Muskau
Dadka intooda badan u timid inaad wakhtiga ku qaataan soo laallaada ee UNESCO World Heritage site, Muskauer Park Jannooyin Ingiriisi cajiib ah ay oo qalcaddii Neo-Renaissance hareereysan gudubno, a yar yar. Wax gaar ah oo ku saabsan park this waa in ay juqraafi kordhiyay in labada Germany iyo Poland! Sidaas socod iyada oo beerta ku jira booqasho uu ku laba dal oo mid ka mid shot. Waxaan jeclaan oolnimada! Ma jiro wax badan inuu gees uga qaban ka this, sidaas booqasho uu ku Bad Muskau waxaa sida ugu wanaagsan wajihi jiidashada kale oo u dhow sida Bridge Devils ka.
Berlin si Tareenadu Bad Maskau
Dresden in Tareenadu Bad Maskau
Aabbo in Tareenadu Bad Maskau
Magdeburg in Tareenadu Bad Maskau
Trip Day From Berlin: Bremen
Waayahay, ok! Waxaan ognahay in ay tani waa qayb ka mid ah stretch ah sida safar maalin. Laakiin marka aad halkaas, waxaad fahmi doontaa sababta ma aan tegi karo off our maalin safarada liiska Berlin! Waxyaabaha la sameeyo in Bremen ka mid ah isagoo casho in a beerta biir Doonta, laallaada ee qurux badan u Schnoorviertel, socda masaafo gaaban oo ka mid ah 100 meter dheer Bottcherstrasse, iyo nasto la qaxwada iyo cake ee saldhig of a soo afjarmay. Waxaad leedahay TGS waxa ay u arkaan naftaada!
Berlin si Tareenadu Bremen
Hamburg si Tareenadu Bremen
Hanover in Tareenadu Bremen
Aabbo in Tareenadu Bremen
Dresden dhigaysa ah safar maalin cabsi badan ka Berlin! Magaaladii waa qiyaastii laba saacadood tareen ka qabto caasimada Jarmalka. Waxay ku taalaa kalabadhka dhexeeya Berlin iyo Prague, waana arrin yar oo si sahlan ay u maraan, taasoo la micno ah in xitaa la hal maalin oo kaliya waxaad awoodi doontaa inaad aragto qayb ilaa xad ah ay noqon doontaa.
The Elbe webiga qaybiyaa magaalada; hal dhinac waxaa jira Altstadt ah (ama Old City), oo dhinaca kale ah, waxaa jira Neustadt (New City), laakiin u malayn waxa, Altstadt waa run ahaantii cusub!
Dresden la duqeeyay dhulka ku dhamaadka WW2 (hubi inaad akhriso kawaanka Five ka hor inta aadan booqo, haddii aad tahay taariikhda) iyo meesha Altstadt la dhiso, sida ay dagaalka ka hor ahaa, laakiin qaar ka mid ah dhismayaasha ku dhammaadeen oo keliya ka dib 2000.
Aabbo in Tareenadu Dresden
Nuremberg in Tareenadu Dresden
Diyaar u ah inay soo baxaan Berlin qaar ka mid ah safarada maalin weyn? Qabo geeyo iyadoo la kaashanayo waxaa Save A tareenka. Kharashka qarsoon, buunbuuninayo ma, kaliya madadaalo!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Top Day qiimeeyo Safaro Qaado From Berlin” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url =https://www.saveatrain.com/blog/maalin-safarada-ka-Berlin/ - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)